Mujaahidiinta Al-qaacidah Oo Weerar La Beegsaday Askarta Faransiiska. – Calamada.com
Mujaahidiinta Al-qaacidah Oo Weerar La Beegsaday Askarta Faransiiska.
calamada July 2, 2018 2 min read
Weerar xoogan oo jidgal ahaa islamarkaana aad loo qorsheeyay ayaa lala eegtay kolonyo gawaari ah oo ka koobnaa ciidamo katirsan dowladda Maali, iyo kuwa Faransiiska ee xooga ku jooga dalkaas.
Wararka la helayo waxay sheegayaan in ugu horeyn kolonyada lagu dhuftay gaari miineysan oo yaalay hareeraha wadada, waxaana markaas kadib ku hoobtay rasaas xoogan oo ay soo ridayeen rag kamiin ka galay hareeraha wadada.
Weerarkan ayaa ka dhacay duleedka magaalada Boriim ee wuqooyiga wadanka Maali, waxaana khasaare culus lagu gaarsiiyay ciidamada xukuumadda Maali iyo kuwa Faransiiska.
Afhayeenka ciidamada Faransiiska ninka lagu magacaabo Batrick ayaa shaaca ka qaaday in 4 askari oo katirsan ciidamadooda ay ku dhaawacmeen weerar ka dhacay wadanka Maali, kaas oo uu sheegay in lala eegtay ciidamo katirsan howlgalka Burkhaan.
Wasiiradda gaashandhiga Faransiiska haweeneyda lagu magacaabo Florance Parly ayaa barteeda twitterka waxay iyaduna ku xaqiijisay khasaaraha gaaray askarteeda, iyadoona cambaareysay ragga weerarka fuliyay.
“Argagaxisadu waxay markale weerar ka geysteen Maali. Waxaa jira ciidamo Faransiis ah oo dhaawacmey, waxaan caafimaad iyo bogsiimo u rajeynayaa ciidamadeena” ayay tiri wasiiradda gaashandhiga dowladda Faransiiska.
Wasaaradaha Amniga iyo Gaashandhiga ee xukuumadda Maali ayaa iyagana war ay soo saareen waxay ku sheegeen in ugu yaraan 4 ruux ay ku dhinteen, halka inkabadan 30 kalana ku dhaawacmeen weerar loo adeegsaday gaari miineysan oo lala eegtay ciidamo wadajir ah oo katirsan Maali iyo Faransiiska.
Majirto cid sheegatay mas’uuliyadda weerarkan, waxaana uu imaanayaa labo maalin kadib, markii Jamaacada Nusartul Islaam Wal Muslimiin ay sheegatay mas’uuliyadda howlgal istish-haadi iyo Inqimaasi ah oo lagu qaaday saldhig ay si wadajir ah ugu suganyihiin ciidamada dowladah G5 ee ka garab dagaallama Faransiiska xooga ku jooga Maali.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Warka Subaxnimo 18-10-1439 Hijri.
Next: Askarta Maamulka Farmaajo Oo Markale Qof Shacab Ah Ku Dilay Muqdisho.